Isku shaandheyn lagu wado in lagu sameeyo golaha wasiirada DKMG Soomaaliya – SBC
Isku shaandheyn lagu wado in lagu sameeyo golaha wasiirada DKMG Soomaaliya
Warar lagu kalsoon yahay oo ay SBC ka heshay ilo wareed oo ku dhaw xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu soo kordhayo qorshe lagu doonayo in isku shaandheyn lagu sameeyo xubnaha golaha wasiirada ee mudada 3-da bilood ka yar jira.
Talaabada lagu doonayo in lagu shaandheeyo golaha wasiirada ayaa la sheegayaa inay isku aragti ka yihiin Madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka Sheekh Shariif Sheekh Axmed & Shariif Xasan Sheekh Aadan, iyadoo sidoo kale ay jiraan warar sheegaya in sidoo kale talaabadaasi ay tahay mid ay doonayaan wadamada taageerada dawlada KMG.
Isku shaandheyntan ayaa la soo sheegayaa inay galaafan doonto xubno wasiiro ah oo fartu ku godan tahay kuwaasi oo ay ka mid yihin wasiirka Gaashaandhiga, Arimaha dibada, Warfaafinta, Arimaha gudaha & waliba shaqada & shaqaalaha, kuwaasi oo qaarkood xilalkooda shaqo dhaliilo lagu xusey.
Ilo wareedka ayaa sheegaya in dawlada Ugandha ay qayb ka tahay talaabada lagu doonayo in xilalka loo qaado wasiirada Gaashaandhigay & arimaha dibada, kuwaasi oo lagu tilmaamay inaanay aqoon u laheyn shaqooyinka wasaaradeed ee loo magacaabay.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in qorshaha isbadalka golaha wasiirada lagu sameynayo ay ka qayb tahay sidii loogu soo dari lahaa golaha wasiirada cusub xubno horey uga mid ahaa xukuumadii Farmaajo.
Cabdikariin Maxamuud Xaaji Fiqi oo ahaa wasiirkii Gaashaandhiga ee xukuumadii Farmaajo & waliba Mustaf Dhuxulow ayaa la hadal hayaa inay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada cusub sida ay sheegayaan ilo wareedka aynu soo xiganay.
Lamase oga mowqifka rasmiga ah ee uu ka qabo arintan Ra’isalwasaare Cabdiwali Gaas balse ay isku raacsan yihin Madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka.
Kkkkkkkkkk…….., horta marka ugu horaysa waxaan allaah kabaryaynaa anigoo ku hadlaaya codka ummadda soomaaliyeed.intooda xaqa taageerta inuu isku diro raaciyada madiidinada gaalada u adeega halkaa waxaa ka muuqanaysa sababihii ay isugu dhici jireen Aamiin teeda kale dad aan jaatar dawladnimo weligood arag xataa siminaar wiilal jeega xiira ah oo qalin iyo buug 20kii wadanku burbursanaa ugu horeysey aan lahayn managment amaba articol dawladeed soo arag iyo iyo niman ahlu xadra wabidcaa ahaa oo weligood reerdabkood ama teendha tacsi loo taagay inay eegtaan maahee aan wax kale ku qadayn Un aministaration ah ayaa gaalo wakiilatay waa kuwaa is haysta maxaa isaga shaqa ah madaxweyne ra isulwasraa iyo gudoomiye barlament baarlamanku waa ilaaliyaha dastuurka ansixinta ama diidmada wixii lasoo hordhigo madaxweynuhu waa xubin dhexdhexaad ah tala bixin xaqbuu uleeyahay wixii wakaalado safiiro gudoomiyaal ookale ah wuu magcaabi karaa isku shaandhaynta magcaabidda wasiirada waxaa gaar uleh ra.iis alwasraa markaa ma aha in waxlaysku qaso hadeerse aniga dawladi meesha iigama muuqato waa danbaabe(DAMBAABKA)ha loogu yeero waayo wixi shacabku soo doorto raalina ka yahay ayaa dawlada.(xirsi xuseen faarax xirsideni)